चपली हाइटमा पत्रकारलाई ला’त हानियो ! एक्सन भन्दै पत्रकारमाथि खनिएपछी यस्तो ल’फडा (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/चपली हाइटमा पत्रकारलाई ला’त हानियो ! एक्सन भन्दै पत्रकारमाथि खनिएपछी यस्तो ल’फडा (भिडियो सहित)
चपली हाइटमा पत्रकारलाई ला’त हानिएको छ । एक्सन भन्दै पत्रकारमाथि खनिएपछी चपली हाइटमा ल’फडा भएको छ। तर यो ल’फडा भने यस वर्षको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘चपली हाइट ३’ को हो । सस्पेन्स थ्रीलर कथामा आधारित भएर बन्न लागेको फिल्म ‘चपली हाइट ३’ को दृश्य हो यो ।
महानगरिय प्रहरी वृत, चपली हाइटमा उक्त फिल्मका केहि दृश्यहरु छायांकन भइरहेका छन् । फिल्मको छायांकन मंसिर ५ गतेबाट सुरु भएको थियो । कार्यविनायक मन्दिरमा पूजा गर्दै फिल्म ‘चपली हाइट ३’ को शुभमुहुर्त गरिएको थियो ।
अर्जुन कुमारको निर्माणमा बन्न लागेको यो फिल्मलाई निकेश खड्काले निर्देशन गर्दैछन् । फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का, सुपुष्पा भट्ट, आमिर गौतमको साथमा नव–कलाकार महेश त्रिपाठी र प्रतिक श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहनेछ । हेरौँ छायांकन भइरहेको उक्त फिल्मको शूटिंग रिपोर्ट भिडियोमा :